यसैगरी भइरहने हो प्रधानमन्त्री कप?
ऋग्वेद शर्मा/सरोज तामाङ बिहीबार, माघ १, २०७७, १९:००
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुक्रबारबाट सुरू हुँदैछ। १७ गतेसम्म त्रिवि क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगिताको तयारीले ‘गर्नका लागि गरिने’ प्रतियोगिताकै झलक दिइरहेको छ।
शुक्रबारबाट प्रधानमन्त्री कप त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा उद्घाटन खेल हुँदै सुरु हुनेछ। त्यसको दुई दिनपछि माघ ४ गतेबाट माथिल्लो मूलपानी क्रिकेट मैदानमा समेत खेल हुनेछ।
प्रधानमन्त्री कप नेपाली क्रिकेटको खेलाडी उत्पादन गर्ने थलो हो। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) कै कार्यक्रम र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजना त्यसका लागि स्पष्ट खाकामा देखिँदैन।
१६ दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिताको १४ खेल त्रिवि क्रिकेट मैदानमा र ९ खेल मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। त्रिवि क्रिकेट मैदान नेपाली क्रिकेटको एक मात्र मैदान बनिरहँदा त्यसैको विकल्पका रुपमा अगाडि सारिएको मूलपानी मैदान भने कहिल्यै नसकिने योजना जस्तो देखिएको छ। अझै पनि त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन विकेट पनि स्तरीय छैन। सेमिफाइनल र फाइनलका खेलहरु त्रिवि मैदानमा मात्र गराउनुले पनि मूलपानी मैदानको हालत बुझ्न सकिन्छ।
त्रिवि मैदानकै पिचमा माटो परिवर्तनको विषय उठिरहेको समयमा मूलपानीमा विकल्पको माथिल्लो मैदान कामचलाउ मात्र हो। फास्ट बलरका लागि पिच उपयुक्त नभएको र बलमा अनावश्यक स्वीङ हुने गरेको यसअघि पनि खेलाडीले बताइरहेका थिए। प्रधानमन्त्री कपका खेल हुने मूलपानीको माथिल्लो मैदानमा बिहीबार चार जना कामदार पिचमा रोलर चलाइरहेका थिए। उनीहरूसँगै क्युरेटर अजय पाण्डे थिए। थप चार जना ‘साइट स्क्रिन’को लागि कालो कपडा बाँध्न फलामको खम्बा गाडिरहेका थिए।
मूलपानी मैदानमा तीन वटा पिच तयार गरिँदैछ। दुई वटा पिच भने खेल्नलायक भइसकेको क्युरेटर पाण्डेको दाबी छ। फुंग उडेको मैदान। मरिसकेको दुबो। मैदानको असमान सतह जस्ता कुरा नेपाली क्रिकेटमा प्रश्न गर्न नमिल्ने विषय जस्तो मानिन्छ। जहाँ खेल हुनु नै सबैथोक हो भन्ने छाप पार्न क्यान लागिपर्छ तर आवश्यक तयारी कहिल्यै गर्दैन।
२०६१ सालमा तत्कालिन क्यानको प्रस्तावमा सरकारले मूलपानीमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान बनाउने गरी योजना बनाएको थियो। २०६२ सालमा माथिल्लो मैदानको निर्माण सुरु भएको थियो। जसमा २०६४ सालमा क्यानले पाकिस्तानी क्यूरेटर ल्याएर पिच बनायो। तर त्यही पिचमा नियमित हुनुपर्ने रेखदेख राम्ररी भएको पाइँदैन।
मैदान सम्याएको छ वर्षसम्म यसै बसेको मैदानमा २०६८ सालमा आइसिसीको सहयोग र सरकारको लगानीमा चार करोड रुपैयाँमा मैदानको पश्चिम भागमा पेविलियन बनाइयो। २०७० सालमा टंक आङबुहाङ नेतृत्वको क्यान कार्यसमितिविरुद्ध मूलपानी मैदानमा काम नगरी पैसा खाएको उजुरी परेपछि निर्माण प्रक्रिया थप ढिलो भएको थियो।
२०७३ सालको असोजमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका तत्कालीन कप्तान पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सुवास खकुरेलसहितका क्रिकेटर र क्रिकेट संघका तत्कालीन प्रमुख कार्यसञ्चालन अधिकृत छुम्वी लामाको पहलमा तत्कालिन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइलीलाई मैदान निर्माणको माग गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
त्यही साल चैतमा राखेपले थप १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएर क्रिकेट मैदान निर्माणको काम अघि बढेको थियो। त्यसबाट मैदान तयार भएपछि २०७४ कात्तिक २५ मा राष्ट्रिय टिम र राष्ट्रिय टिमका पूर्वखेलाडी बीच मैत्रीपूर्ण खेल पनि भएको थियो। २०७५ साल जेठमा प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट माथिल्लो मैदानमा नै खाल्डाखुल्डीकै बीच गराइएको थियो।
२०७६ जेठमा राखेपमा सदस्यसचिव थिए, केशवकुमार विष्ट। त्यो बेला क्यान आइसिसीको निलम्बनमा थियो। प्रधानमन्त्री कपका बेला बर्हिगमन नजिक रहेका तत्कालिन सदस्यसचिव विष्ट आलोचित बने। आफ्नै कार्यकालमा मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनेको सन्देश दिन उनले प्रधानमन्त्री कप म्याट ओछ्याएर खेलाए। त्यसपछि सुरु भयो उनको आलोचना। मैदानभित्रै रहेको दुई वटा घर, म्याटमा प्रतियोगिता। यस्तो हरिविजोग देख्दा सदस्यसचिव विष्टको आलोचना हुनु स्वभाविक थियो।
राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले मुख टालेरै खेले। बोलेर के गर्नु? क्यान नै निम्लबनमा। सबै समस्या र कठिनाइलाई खेलाडीले भूलेर खेले। तर फेरि त्यस्तै, हविगत हुँदैछ प्रतियोगिताको। त्यस्तै, हरिविजोग भएको मैदानमा हुँदैछ प्रतियोगिता। तल्लो मैदान अझै कहिले बनिसक्ने हो थाहा छैन, माथिल्लो मैदान कामचलाउ स्थितिमै छ।
क्यानको लापारबाहीको कारण प्रतियोगिताका खेल मूलपानीमा खेलाउँदा खेलाडीमा चोटको समस्या पर्ने डर बढी छ। तर यसबारे क्यानले केही सोचेको छैन। क्यानलाई जसरी भए पनि प्रतियोगिता गर्नु छ। सरकारको काम र खेल भयो भन्नेमा आइसिसीको विश्वास जित्नेबाहेक अरु उद्देश्य देखिँदैन। तर क्यानको बेढंगको तयारीले हुनसक्ने हानी बुझेको छैन।
राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीले खेल्न लायकको मैदान पक्कै पनि मूलपानी बनिसकेको छैन। मैदानमा बाउन्ड्री लाइन पनि सानो छ भने बाउन्ड्रीभित्रै खाल्डा खुल्डी उत्तिकै छ। जसले खेलाडी फिल्डिङकै क्रममा घाइते हुने सम्भावना बढ्नेछ।
प्रधानमन्त्री कप नै कामचलाउआइतबार, पुस १९, २०७७
यस्तो मैदानमा कसरी खेल्नु हुन्छ? भन्ने जिज्ञाशामा व्यंग्यात्मक शैलीमा एक क्रिकेटर भन्छन्- ‘कसरी खेल्नु नि, उताबाट बल फाल्ने यताबाट ब्याट चलाउने।’
एकदिवसीय मान्यता अघि बढाएर नेपाली क्रिकेट माथि उठाउने जिम्मेवारीमा रहेको क्यानले प्रधानमन्त्रीको नाममा गरिरहेको प्रतियोगिता आलोचित हुने बाटो मात्र बन्दा पनि अझै सोचेको देखिँदैन। यसअघिका प्रतियोगिताबाट पाठ नसिक्नु नै क्यानको गैरजिम्मेवारी हो।
फ्रेन्चाइज क्रिकेटका प्रतियोगिता हुँदाको नेपाली क्रिकेट मैदान र सुविधा, राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्दा क्यानले दिन किन सक्दैन? निलम्बन फुकुवा भएको पनि १६ महिना नाघ्न लाग्यो। यो अवधिमा क्यानले प्रधानमन्त्री कप आयोजना गर्न डटेर लागेको देखिँदैन।
अझ अचम्मको कुरा त, क्यानका सबै बोर्ड सदस्यहरुलाई नै प्रधानमन्त्री कप माघ २ गतेदेखि सुरु हुँदै छ भन्ने राम्रो जानकारीसमेत छैन। त्रिवि क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार बिहान ८ः३० बजे प्रधानमन्त्री कपको उद्घाटन खेलकुदमन्त्री दावा लामाले गर्दैछन् भन्ने जानकारी आएपछि प्रतियोगिताबारे क्यानका धेरै सदस्यले थाहा पाए।
‘काकाकुल’ क्रिकेटरशनिबार, पुस २५, २०७७
यसले क्यानमा अहिले कामको बाँडफाँड जिम्मेवारीमा एकता छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। क्यानका नेतृत्वकर्ता नेपाली क्रिकेटको विकास गर्न चुनाव जितेर आएका होइनन् कि भन्ने प्रश्नसमेत यसैले उठाएको छ।
पुसमा दाङ लमहीस्थित देउखुरी क्रिकेट मैदानमा भएको प्रधानमन्त्री कप महिला टी ट्वान्टी क्रिकेट पनि गर्नका लागि गरेको स्थितिमा नै सकियो। खेल नभइरहेको अहिलेको अवस्थामा खेल हुनु नै ठूलो कुरा हो भनेर ब्याख्या गरियो तर प्रतियोगिताको उपयुक्त तयारी र सुविधामा ध्यान दिइएन। अहिले फेरि त्यही अवस्था पुरुष क्रिकेटमा दोहोरिँदैछ।
नेपाललाई ‘थ्री नेसन्स कप’को उपाधि
खेलमा बिध्रुप रूप : पदको झगडामा बक्सिङ संघ
बरु राखेप नै खारेज गरिदिएको भए हुने : किशोरबहादुर सिंह [अन्तर्वार्ता]
फुटबलका नयाँ प्रशिक्षक : नेपाललाई अवसर कि अर्को प्रयोग मात्र? नेपाली फुटबलको इतिहासलाई पल्टाउने हो भने विगत र अहिले खासै फरक छैन। अझ भनौं नेपाली फुटबल दक्षिण एसियामै घुमिरहेको छ। त्यसैले त साफ च... सोमबार, चैत २३, २०७७
नेपाल भर्सेस् बंगलादेश : बराबरीमा सकियो पहिलो हाफ [तस्बिरहरू] खेलको २४औं मिनेटमा त्रिदेवले गोल गर्ने अवसर पाएपनि उनको प्रहार गोलपोस्टभन्दा निकै परबाट बाहिरियो। खेलको ४०औं मिनेटमा जमल हुयाले प्रह... शनिबार, चैत १४, २०७७
फ्लोएडको हत्यामा संलग्न प्रहरी दोषी ठहर बुधबार, वैशाख ८, २०७८
गच्छदारको नाममा काठमाडौंको ठेगानामा म्याद तामेल गर्दै अदालत बुधबार, वैशाख ८, २०७८